Iimoto zoLoliwe zaseThai ze-COVID-19 zezigulana ezingenazo ii-AC okanye izindlu zangasese
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Iimoto zoLoliwe zaseThai ze-COVID-19 zezigulana ezingenazo ii-AC okanye izindlu zangasese
Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Iindaba ezahlukeneyo
Iimoto zoLoliwe zaseThai zabaguli be-COVID-19
Akukho zomoya kwaye akukho zindlu zangasese… okwangoku. Yiloo nto abaguli be-COVID-19 abajamelene nayo xa bangeniswa kwiiwadi zabo zodwa-iimoto zoololiwe eziguqulweyo.
I-Thailand i-COVID-19 yezigulana eBangkok ezilindele ukuthunyelwa kwindawo yonyango ziya kubekwa bucala kwiimoto zikaloliwe eziguqulweyo.
Eli ziko lokuzimela liyabekwa kwindawo yokugcina uloliwe yombane eBang Sue.
Umsebenzi uyaqhubeka ukufaka umnatha wengcongconi kunye nezindlu zangasese zangaphandle kunye nokudibanisa iinqwelo zombane namanzi.
I-Bangkok Metropolitan Administration (i-BMA) kunye ne-State Railway yase-Thailand (i-SRT) ngoku basebenzela ukuvula indawo yokuzahlula abaguli be-COVID-19 kwisikhululo sikaloliwe sombane iBang Sue Grand.
Thailand Irhuluneli Pol. U-As Aswan Kwanmuang uthe eli ziko liza kusebenza njengeziko lokwamkelwa kwangaphambili kwizigulana ze-COVID-19 ezingabonakaliyo e-Bangkok ezilindele ukuthunyelwa kwindawo yonyango.
Zili-15 iinqwelo zokulala ezingenamoya ngoku ziguqulwa zaba ziiwadi ezizodwa. Inqwelomoya nganye inokuhlala ukuya kuthi ga kwizigulana ezili-16, kusetyenziswa ibhedi esezantsi kuphela. Kwenziwa imisebenzi yokufaka izikrini kwiingcongconi kwiifestile, ukuqhagamshela iikhareji kwigridi yamandla kunye nenkqubo yamanzi, kunye nokufaka izindlu zangasese zangaphandle.
Uthe le projekthi yaqalwa ngu-Mphathiswa Wezothutho uSaksayam Chidchob, oyalele i-State Railway yase-Thailand kunye ne-Bangkok Metropolitan Administration ukuba baseke indawo yokuzalela abaguli kunye.